म समलिङगी ब्वायको पोस्टर बनिसकेको छु -करण जोहर |
म समलिङगी ब्वायको पोस्टर बनिसकेको छु -करण जोहर
9 January, 2017 | Bhawana Pathak | 900 Views | comments
बलिउड निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर लैगिंक अभिमुखिकरणका बारेमा खासै खुलेर कुरा गर्दैनन् । तर अब उनको बायोपिकले भने जीवनका केही रहस्यहरुको खुलासा गर्ने भएको छ । करण जोहरकी सहायक लेखक पुनम सक्सेनाले करणको बायोपिकमा उनका जीवनमा केही रहस्यहरुको खुलासा गरेकी छिन् ।
करण जोहरको बायोपिक ‘एन अनसुटबेल ब्वाय’मा जीवनका केही रहस्यहरु समावेश छन् । करण जोहर र शाहरुख खानको मित्रता देखेर धेरैले उनीहरुको सम्बन्धमा शंका गर्छन् । शाहरुख खानसँगको सम्बन्धका बारेमा बायोपिकमा करणले भनेका छन्, “बर्षौ देखि शाहरुख र मेरो बारेमा बिभिन्न हल्लाहरु चलिरहेका छन् ।
पहिले त मलाई यस्ता कुराहरुले तनाव पनि हुन्थ्यो । एक पटक मलाई एक कार्यक्रममा तपाईँको र शाहरुखको सम्बन्ध पनि अचम्मको छ है भनियो । प्रस्तोताको कुरा गर्ने शैली नै अचम्मको थियो जुन देखेर मलाई रिस उठ्यो । रिसको झोकमा मैलै पनि उनलाई भनेँ तपाईँ आफ्नो भाईसँग सुत्नुहुन्छ ? अनि उनले मसँग मैले सोधेको प्रश्नको मतलब खोज्न थाले । अनि मैले उनलाई भने, तपाईँले मेरो प्रश्नमा मतलब खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो बारेमा गर्नु भएको कुराको मतलब के हो ? “
आफू समलिङगी भएको बारेमा करण जोहर भन्छ्न, “यदि कोही मानिस एक्लै छ भने उसले म ऊ सँग सुत्न चाहन्छु भन्ने सोच्छ । म कहिल्यै पनि लैङिगक अभिमुखिकरणका बारेमा कुरा गर्दिन ।
किनकी मेरो समस्या भनेको म समलिङगी हुनु हो । मानिसहरु मेरो बारेमा के सोच्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । म यो देशको लागि समलिङगी ब्वायको पोस्टर बनिसकेको छु । मानिसहरु मलाई तिमीले यो देशको नाम र समाजलाई बर्बाद गर्यौ भन्छन् । मलाई यस्ता कुराहरुले खासै असर गर्दैन । उल्टो मलाई त यस्ता कुराहरु सुन्दा र सामाजिक सञ्जालमा पढ्दा हाँसो उठ्छ । “
#म समलिङगी ब्वायको पोस्टर बनिसकेको छु -करण जोहर